ZITHATHELE Dornier Do328 Turbo for FS2004 - Rikoooo
Usayizi 11.87 MB
Play 5 445
I Do328 oluyisisekelo kuqala landizela on 6 December 1991, futhi wangenela inkonzo commercial ngo-Okthoba 1993. fuselage omusha 328 wawuvumela for ukhululekile 3-elinganisene zihlalo, abanesifiso sokuba ukumisa 4-elinganisene. Kuhlangene iphiko supercritical Sisuka Dornier sika Do 228, lokhu wanika 328 cruise omuhle futhi sikhuphukela amakhono.
Ngo 2005, Australian Maritime Safety Authority (Amsa) ukhishwa ithole inkontileka AeroRescue isikhathi eside-range Search and Rescue (SAR) khono Australia. Five 328-100s abangu ngokuqhubekayo ethunywe kusuka April 2006 kuya kuFebhuwari 2007 futhi ababemi ugu Australian ukunikeza a ihora 24, 30 ngomzuzu impendulo khono.
Ngo-January 2008 a ingqikithi 80 Dornier 328-100 izindiza saqhubeka khona nenkonzo yendiza. Zihlanganisa 3 repaints, iphakethe ephelele quality enhle
Socata TB10 Tobago Okugcwele Package FS2004